Ahoana no ahafahako mandray soa avy amin'ny tranonkala fanatsarana tranonkala?
SEO (famantaran-karoka fitadiavana) dia fomba iray mahomby hanamboarana tranonkala hita ao amin'ny SERP. Ity rafitra an-tserasera ity dia manome fahafahana ireo tompon-tranonkala hifanaraka kokoa amin'ny Google, Bing, Yahoo, ary ireo karazana fikarohana hafa malaza.Ny avo kokoa no avoakanao, ny fitohanan'ny fifamoivoizana. Ny fifamoivoizana amin'ny kalitaona dia midika hoe fiovam-po sy fivarotana avo. Ny mpampiasa tsaratsara kokoa dia mahazo ny fiasanao miaraka amin'ny tranonkalanao, ny safidy lavitra kokoa ho an'ity mpampiasa ity dia hamerina ho anao handoa mpanjifa. Noho izany, amin'ny fametrahana fanatsarana ny tranokalan'ny fikarohana amin'ny tranonkala, dia manome lanjany ny mpanjifanao ianao, ary manome azy lanjany ho anao amin'ny fotoanany - company mobile. Ny tranonkala fanamafisana kalitao dia ahitana mpikaroka momba ny tsena, fanaraha-maso an-tserasera, fifantenana kalitao kalitao, fampiroboroboana an-tserasera sy fantsom-pamokarana. Ireo teknika rehetra ireo dia natao hahatonga ny mpanjifa mety hahita ny loharanon'ny tranonkalan'ny tranokala an-tapitrisany. Araka ny antontan'isa momba ny statistika, eo amin'ny 90 isan-jaton'ny mpampiasa dia manasitrana rohy amin'ny pejy SERP voalohany raha mihevitra izy ireo fa mifandraika amin'ny fangatahan'izy ireo ireo sehatra ireo ary manana fahefana ambony. Ary marina izany. Araka ny algorithm Google, ny tranonkala avo lenta sy mendri-piderana mendrika ihany no mendrika ny ho voalohany amin'ny pejy farany. Andeha hojerentsika ny serivisy fanatsarana izay afaka manatsara ny tranokalantsika aty amin'ny aterineto ary mahazo ny tranokalantsika any amin'ireo toerana ambony Google.
, mila mahafantatra ianao hoe ahoana no ahafahan'ny mpifaninana mifantoka amin'ny orinasa an-tserasera. Tokony ho fantatrao hoe inona ny orinasa eo amin'ny varotra anao no mikendry ireo teny fanalahidy iray mitovy ary mahatratra ny mety ho mpanjifa anao. Ankoatr'izay, mila mahafantatra izay tanjon'ny tetikasam-pahaizana ampiasainy ianao mba hanatsarana ny doka. Fotoana tena tsara ho anao ny manentana ireo trangam-pahombiazana ilaina ho an'ny fanentanana fanentanana anao. Ilainao ny mandinika ireo teboka marevaka sy matanjaka amin'ny mpifaninana aminao mba hahafantarana ny fomba hifaninana amin'izy ireo.
Fanandramana hafa ny tranonkala fanasitranana hafa dia fikarohana momba ny teny fototra. Izy io dia fototry ny fanentanana fanentanana izay mitarika ny dingana manaraka anao. Mba hananganana fanentanana SEO iray mandresy lahatra sy mifantoka amin'ny mpanjifa mety aminao, mila mamantatra ireo teny manan-danja ireo mpampiasa mety ampiasaina rehefa mitady ny vokatrao na ny serivisinao. Raha manao fikarohana karazana fikarohana ianao, dia ho afaka hiteraka fiverenana ambony amin'ny fampiasam-bola ianao. Ataovy azo antoka fa ny teny fanalahidy anao dia tsy mifaninana be loatra sy lava lava mba hahafahanao mifaninana amin'ny mpilalao SEO maharitra.
. Ny isan'ireo loharano manondro ny tranokalanao dia mamaritra ny fahefany sy ny lazany. Mila manintona rohy tsara ianao hanatsara ny fikajiana ny tranonkalanao. Ataovy azo antoka fa mametraka ny rohy amin'ny sehatra ianao ary mifandray amin'ny sehatra nichanao. Ankoatr'izay, mila ampidirina rohy ao amin'ny votoaty miavaka sy mampiroborobo ny mpampiasa hanaraka ny tranokalanao ianao raha mila fanazavana fanampiny. Ny fananganana kalitao sy rohy mifandraika amin'ny vohikala hafa dia fotoana iray mandany fotoana sy sarotra izay mitaky ezaka sy faharetana.